Imidlalo eli-15 eyonwabisayo yokudlala kwiZoom yaBantwana neentsapho - Online Games
Imidlalo eli-15 eyonwabisayo yokudlala kwiZoom yaBantwana neentsapho
Xa ungakwazi ukuba kunye nomntu, kulula ukuba abantwana kunye neentsapho badlale imidlalo ebonakalayo nge isixhobo sokunxibelelana nevidiyo Zoom . Awudingi naziphi na izinto ezizodwa zokudlala le midlalo, yintoni esendlwini yakho, ikhamera yewebhu, kunye ne-Zoom. Inguqulelo esisiseko yoSondeza isimahla, kodwa kuya kufuneka wenze iakhawunti ukusingatha indibano.
IiCharades yenye yezona zinto zilula kunye nemidlalo emnandi yabantwana kunye nabantu abadala bayo yonke iminyaka yokudlala kwi-Zoom. Lo mdlalo weqela ufuna ubuncinci abathathi-nxaxheba, kodwa okungcono kungcono.
Imidlalo eli-15 yesiqwengana saBantwana
Imisebenzi yokuDibanisa usapho
Imidlalo emi-2 yeBhodi yaBadlali abaDala ilungele iSeshoni yokuDibanisa
Ukusingathwa komnxeba we-Zoom kufuneka ukhethe iindidi ezimbalwa ngokubanzi kwaye ubhale nganye kwiphepha elisecaleni. Ezi ndidi zingagcinwa kwisitya. Iindidi ezilula zomntwana ezinobuhlobo zibandakanya:
Iimuvi zoopopayi (inokuba sisihloko, iingoma, okanye abalinganiswa)
Izinto ozenzayo endlini
Izinto ozenzayo ehlotyeni
Iimpawu zoom ezisetyenzisiweyo
Ukudlala umdlalo kuya kuhamba ngokulandelelana kwealfabhethi yegama lakho lokuqala kwi-Zoom.
Ukuqala umjikelo, umamkeli we-Zoom uya kutsala udidi olunye kwisitya.
Umthathi-nxaxheba ngamnye (obandakanya onke amalungu osapho abelana nge-webcam enye) uya kuba nethuba lokwenza into ethile kumjikelo ngamnye.
Umthathi-nxaxheba ogama lakhe lokuqala lisebenza ngokwe-alfabhethi kuqala. Ukuba kukho abantu abaninzi kule webcam, kuya kufuneka bakhethe umdlali abe mnye kwaye ngasese bakhethe into ibe nye yokuba ayenze umdlalo.
Umlingisi ucofa u 'Yabelana,' emva koko akhethe ukhetho olukhethiweyo olubonisa oko kubonwa yikhamera yakhe yewebhu. Qiniseka ukuba imakrofoni kunye nevidiyo zivuliwe, kodwa bonke abanye kufuneka babe nee-microphone zabo.
Ulingisa igama alikhethileyo okanye ibinzana elingqinelana nenqanaba elitsalwe ngumphathi.
Ukuqikelela igama okanye ibinzana, bonke abanye abathathi-nxaxheba mabachwetheze ingqikelelo yabo kwincoko.
Nabani na oqikelela kuqala kwingxoxo ufumana inqaku.
Bonke abathathi-nxaxheba bathatha ithuba lokudlala into ethile kwinqanaba elifanayo kulo mjikelo.
Ukudlala imijikelezo eyongezelelweyo, umamkeli we-Zoom unokukhupha inqanaba elitsha kumjikelo ngamnye.
Umdlali (abadlali) unamanqaku amaninzi awinileyo ekugqibeleni.
IBhodi emhlophe iHangman
Ukudlala ngokuxhoma kulula xa usebenzisa uphawu lwebhodi emhlophe yeZoom. Ivumela abathathi-nxaxheba ukuba bongeze isicatshulwa, iimilo, kunye nemizobo yesandla sasimahla kwiscreen. I-Hangman ngumdlalo wabantu ababini, kodwa ungayenza umdlali odlala ngokutshintsha amagama oonobumba. Sebenzisa amagama angatshatanga xa udlala nabantwana abancinci kwaye ugqibezele izivakalisi okanye amabinzana xa udlala nabantwana abadala.
Ukwabelana ngescreen-iBhodi emhlophe
Khetha umntu omnye oza kuthatha inxaxheba. Lo mntu uya kukhetha ibinzana lokuxhoma.
Umntu okhetha ibinzana le-hangman kufuneka acofe 'ukhetho oluninzi' ngaphezulu kwesikrini sabo, emva koko banokucofa kwisixhobo esincinci sokubhala.
Lo mntu kufuneka azobe ibhodi yokuxhoma esemgangathweni, afake imigca engenanto kubo bonke oonobumba kwigama labo okanye ibinzana, kwaye asebenzise isixhobo sokubhaliweyo ukwenza ibhokisi yokubhaliweyo equka zonke iileta zoonobumba ngokulandelelana.
Yiya ngolandelelwano lwealfabhethi ngegama kwaye uvumele omnye nomnye umdlali aqashele unobumba. Ukuqikelela ileta, umdlali ufuna ukungqamanisa imakrofoni yakhe aze athi ileta.
Umntu okhethe ibinzana uya kuthi ke ongeze unobumba kumgca ongenanto ukuba uyangena apho, okanye awunqumle kwaye uzobe inxalenye yenduku yendoda.
Abadlali bayatshintshana ngokuqikelela unobumba omnye ade umntu aqikelele igama okanye ibinzana. Kwelinye icala, endaweni yokuqikelela unobumba, lo mdlali unokuqikelela igama okanye ibinzana ngokuvula imakrofoni yakhe aze athi okanye alichwetheze engxoxweni.
Ukuba umntu wokuxhoma uxhonyiwe ngaphambi kokuba nabani na aqikelele igama okanye ibinzana, akukho mntu uphumeleleyo kwaye umntu onegama elilandelayo loonobumba baya kulandela.
Umdlali oqikelela impendulo echanekileyo ukhetha igama okanye ibinzana kumjikelo olandelayo.
Umamkeli we-Zoom unokucoca yonke itekisi kunye nemizobo ebhodini emhlophe ekupheleni komjikelo.
Abantwana abancinci bayonwaba ngale nto esebenzayo Umdlalo ofanayo wosapho . Uzakufuna ubuncinci abadlali ababini, kodwa unokuba nokuninzi kangangoko ufuna. Abadlali baya kudinga ukufumana izinto emakhayeni abo ezihambelana nezinto ezivela kwamanye amakhaya omdlali.
nelangatye livutha ikhandlela
Khetha umdlali omnye oza kuqala. Lo mntu kufanele ukuba ibe nguye kuphela nevidiyo kunye nevidiyo ukuqala kwakhe.
Umdlali wokuqala ufumana nayiphi na into evela ekhayeni lakhe kwaye uyayibamba ukuze wonke umntu ayibone malunga nemizuzwana engama-30.
Lo mdlali uyakhwaza 'Yiya!' kwaye bonke abanye abadlali kufuneka bakhangele amakhaya abo befumana into efana naleyo ibonisiweyo. Umzekelo, ukuba into ebonisiweyo sisikipa esibomvu esineflegi kuso, ungazama ukufumana isikipa esibomvu okanye nesikipa esineflegi kuso.
Xa umdlali efumana into ehambelana nayo, uvula ividiyo yakhe aze ayibambe.
Umdlali obuyisa owona mdlalo ubalaseleyo ufumana inqaku. Ukuba kunzima kakhulu ukuxelela ukuba ngubani ophumeleleyo, cela bonke abadlali ukuba bavote engxoxweni.
Bonke abadlali bathatha ithuba njengokukhetha into abanye ekufuneka bayitshatisile.
Dlala imijikelezo emininzi njengoko ufuna. Umdlali onamanqaku amaninzi aphumeleleyo.
Inyaniso yoSapho okanye iDare
Inyani okanye ndifungengumdlalo olula abantwana kunye neentsapho zinokudlala naphina. Misela imigaqo ethile yokuqalisa, njengobuganga kufuneka bubudala obufanelekileyo kwaye ubandakanye izinto wonke umntu anazo okanye anokuzenza phambi kwekhamera. Ufuna ubuncinci abadlali ababini, kodwa kokukhona kukudibana.
Sebenzisa uphawu lwebhodi emhlophe ukwenza uluhlu lombuzo wenyaniso kunye noluhlu lwezinto ezinqabileyo njengeqela. Yenza ikholamu nganye nganye kwaye uvumele abadlali batshintshane ngokudibanisa izinto.
Yiya ngokulandelelana ukusuka komncinci kuye koyena mdala.
Oyena mntu mncinci uza kuqala ngokuvula imakrofoni yakhe kwaye akhethe nawuphi na umdlali oza kubuza 'iNyaniso okanye iDare?'
Ukuba umdlali ukhetha iNyaniso, umntu obuzileyo ukhetha umbuzo omnye kuLuhlu lweNyaniso ukuze baphendule.
Ukuba umdlali ukhetha ukungavumi, umntu obuzileyo ukhetha enye indlela yokujonga kuluhlu lweeDare ukuba bazenze kwikhamera.
Ukudlala umdlalo kuyaqhubeka okoko ufuna, okanye ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-40 kuba lowo ngumda weentlanganiso zamaqela kwinguqulelo yasimahla yeZoom.
Lungisa umdlalo weklasikhi obonisa uQhushululu losapho kumdlalo omnandi woSondeza abantwana kunye neentsapho. Lo mdlalo usebenza kakuhle xa ubuncinci abadlali abali-10 abanokwahlulwa babe ngamaqela ama-2.
Uya kufuna ukuba nezinto ezilulaImibuzo yoSapho yoSaphoilungile ngaphambi kokuba umdlalo uqale.
Vula umsebenzi webhodi emhlophe ngokunqakraza 'Yabelana' emva koko ukhethe ukhetho 'lwebhodi emhlophe'.
Zoba ibhodi yomdlalo woSapho yoSapho enezithuba ezintathu ezingenanto zeempendulo kunye nendawo yokugcina amanqaku kwiqela ngalinye.
Kuyanceda ukongeza amagama abadlali kwiqela ngalinye kwindawo yabo yamanqaku.
Kwindawo engenanto engenanto, dibanisa inani '20, 'kwisithuba esiphakathi fakela inombolo '10,' kwaye kwisithuba esingezantsi faka inani '5.' La ngamaxabiso amanqaku kwimpendulo nganye.
Umdlali omnye kufuneka abambe umjikelo ngamnye, ke batshintshane ngokukhetha umntu omnye kwiqela lakho ukuba alisingathe.
Umbuki zindwendwe uya kufunda umbuzo ngokuvakalayo kwiqela kwaye acele wonke umntu ukuba athumele umyalezo wabucala kubo ngempendulo yokuqala ethi qatha engqondweni. Kwicandelo lengxoxo kuya kufuneka ubone 'wonke umntu' ngaphezulu apho unokuchwetheza khona. Ukuba ucofa utolo ezantsi ecaleni kwalo, unokukhetha umntu oza kuthumela umyalezo wakho kuye.
Umgcini uya kuthatha zonke iimpendulo kwaye afumane ezi-3 ziphezulu ngokusekwe kwinani labadlali abanike impendulo efanayo. Ukuba bonke abadlali banike iimpendulo ezahlukeneyo, umamkeli unokukhetha ezabo ezi-3 eziphezulu kwezi zikhethiweyo.
Bonke abadlali ngaphandle komgcini kufuneka bayicime ividiyo yabo.
Umbuki zindwendwe uya kubuza umbuzo.
Umntu wokuqala ukuvula ividiyo yakhe uphendula kuqala.
Ukuba impendulo yabo yenye yezi-3 eziphezulu, iqela labo liya kudlala kumjikelo. Umgcini ubhala le mpendulo kwibhodi yomdlalo.
Ukuba impendulo yabo ayisiyiyo eyoku-3 ephezulu, umdlali wokuqala kwiqela elichasayo lavulela ikhamera yabo bayaqikelela.
Ukuba akukho qela liqikelela impendulo ebhodini, qala ujikeleze kunye neekhamera zomntu wonke.
Iqela elidlala umjikelo emva koko liyatshintshana ngokuqikelela ezinye iimpendulo ebhodini. Ukuba bacinga ukuba akulunganga, bafumana isitrayikhi. Ukuba baqikelela ngokuchanekileyo, ibhalwa ebhodini.
Ukuba iqela liqikelela zontathu iimpendulo ngaphambi kokuba lifumane ukubetha okungu-3, ​​bafumana onke amanqaku angama-35.
Ukuba iqela lifumana ukubetha okungu-3 ngaphambi kokuba baqikelele iimpendulo ezintathu, elinye iqela linokusebenzisa incoko ukuza noqikelelo olunye kwiqela labo liphela.
Ukuba iqela elichasayo liqikelela impendulo ebhodini, liba onke amanqaku angama-35.
Bhala amanqaku uze ukhethe umamkeli omtsha kwiqela elichasayo kumjikelo olandelayo.
Dlala imijikelo emihlanu. Iqela elinamanqaku amaninzi liphumelele.
Iiapile kwiiApple Imvelaphi
Sebenzisa indawo epholileyo ye Zoom imvelaphi ebonakalayo ukudlala uguqulelo olubonakalayo lomdlalo webhodiIiapile kwiiApple. Endaweni yamakhadi, abadlali kuya kufuneka bongeze imvelaphi ebonakalayo efanelekileyo nelizwi elinikiweyo. Ufuna ubuncinci abadlali abathathu kulo mdlalo, kodwa okungakumbi, kungcono.
indlela yokuxelela ukuba i-bill ezimbini zeedola ziyinyani
Umthathi-nxaxheba ngamnye kuya kufuneka ukuba abe neqela lemifanekiso elungile kwikhompyuter yakhe ukongeza njengemvelaphi ebonakalayo. Uya kufuna ubuncinci imifanekiso eyi-10 onokukhetha kuyo, kwaye nganye nganye inokuba nomxholo owahlukileyo. Umbuki zindwendwe kufuneka aqinisekise ukuba isetiwe ukuze wonke umntu asebenzise imvelaphi ebonakalayo. Abasebenzisi ngabanye banokungena kwiakhawunti yabo yeZoom kwaye bajonge phantsi 'kweZisetingi zam' ukuze baqiniseke ukuba bayilenzile eli nqaku.
Khetha umdlali abe mnye ukubamba kuqala. Lo mntu kufuneka avule imakrofoni yakhe kwaye axelele wonke umntu igama, isenzo, okanye igama lomntu odumileyo.
Wonke omnye umdlali kuya kufuneka acofe utolo oluya phezulu ecaleni kwekhamera yevidiyo, khetha 'khetha imvelaphi ebonakalayo,' kwaye ucofe 'ukongeza umfanekiso.' Oku kukuvumela ukuba uthathe enye yemifanekiso yakho ecwangciswe kwangaphambili kwaye uyongeze njengemvelaphi ebonakalayo.
Xa bonke abadlali benemvelaphi ebonakalayo, umphathi uya kuthatha isigqibo sokuba leliphi igama elifanelekileyo okanye igama abalikhethileyo. Umdlali onemvelaphi efanelekileyo ufumana inqaku elinye.
Ilungu ngalinye losapho lithatha ithuba lokuba ngumbuki zindwendwe.
Umdlali onamanqaku amaninzi aphumeleleyo.
Igama lale ngoma
Unokudlala ngokulula umdlalo wegama elileNgoma kwi-Zoom usebenzisa ii-microphone zakho kuphela. Lo mdlalo ungcono kumaqela amalunga nesihlanu, ngakumbi xa omnye okanye abadlali abaninzi bengenayo ikhamera yewebhu.
tyikitya inja yakho iya kubeleka
Umdlali ngamnye uya kudinga ukuba alungele umculo nokuba kukwifowuni, ithebhulethi, ikhompyuter, unomathotholo, okanye isidlali seMP3. Kuyanceda ukukhetha uhlobo oluthile lomculo neengoma abantu abaninzi kwiqela lakho abaya kuzazi. Ukuba udlala nabantwana abancinci, bambelela kwiingoma zabantwana.
Yiya ngokulandelelana ukusuka koyena mdala kuye koyena mncinci.
Imvumi yokuqala idlala malunga nemizuzwana engama-20 yokuqala kwengoma enye ukuze wonke umntu ayive.
Umdlali wokuqala ukuthayipha isihloko sengoma esifanelekileyo kwingxoxo ufumana inqaku.
Umdlali ngamnye ufumana ukujika kube kanye njengemvumi.
Umdlali onamanqaku amaninzi ekugqibeleni nguye ophumeleleyo.
Yikholwe okanye ungakholelwa, ungadlala iwinking yeklasiUmdlalo weqhwa, Wink Assassin kwi Zoom. Lo mdlalo ulungele abantwana abadala kunye namaqela amakhulu.
Ingxoxo-eyabucala kunye nawo wonke umntu
Wonke umntu kufuneka agcine ikhamera yakhe ekuqaleni komjikelo ngamnye.
Kumjikelo ngamnye, khetha imodareyitha enye. Imodareyitha ikhetha umbulali kumjikelo kwaye ayidlali.
Imodareyitha kufuneka ithumele umyalezo wangasese kumntu abatyumbe njengombulali.
Imodareyitha iqala incoko malunga nantoni na.
Ngexesha lencoko, umbulali uza kucwina, emva koko athumele umyalezo wangasese kulowo bamqhwanyazayo athi 'wink.'
Kwimizuzwana emi-5 yokufumana umyalezo 'wink', umdlali kufuneka afe ngokumangalisayo emva koko ayicime ividiyo.
Abanye abadlali kufuneka bongeze ukuba ngubani umbulali emva kokubhubha ngokuthayipha kwincoko ukuze ibonwe ngumntu wonke.
Umbulali uhlala eqhwanyaza abantu ade umntu aqikelele ukuba ungubani.
Umdlali wokuqala ukuqikelela umbulali uba yimodareyitha elandelayo.
Dlala iklasikhiInkcazo yokuqikelela umdlalo weBalderdashngaphandle kokuba ngumnini womdlalo webhodi. Le nguqulo yeBalderdash yahlukile kwi-Zoom, ke unokuyibiza ngokuba yiZoomerdash. Uzakufuna ubuncinci abadlali abathathu, kodwa umdlalo ungoyena ujikeleze isihlanu. Abantwana abaneminyaka esibhozo nangaphezulu baya konwaba kakhulu ngalo mdlalo.
Umdlali ngamnye uya kufuna ukufikelela kwisichazi-magama ukuze adlale. Ungasebenzisa nasiphi na isichazi-magama esikwi-Intanethi.
Khetha umdlali abe mnye. Umbuki zindwendwe unokukhetha naliphi na igama elingaqhelekanga kwisichazi-magama.
Umbuki zindwendwe makabhale igama lakhe kwibhodi emhlophe.
Umdlali ngamnye kufuneka enze inkcazo yelo gama aze alithumele ngasese kumphathi.
Nje ukuba inkcazo ibekho kumdlali ngamnye, kuya kufuneka ongeze zonke iinkcazo, kubandakanya nengcaciso yokwenyani, kwibhodi emhlophe.
Umdlali ngamnye kufuneka achwetheze kwincoko yeqela ukuqikelela malunga nokuba yeyiphi inkcazo echanekileyo.
Nabani na oqikelela inkcazo elungileyo ufumana inqaku.
Dlala imijikelezo emininzi njengoko ubungathanda kumsingathi omtsha kumjikelo ngamnye.
Umdlali onamanqaku amaninzi nguye ophumeleleyo.
Omnye wemidlalo elula yabantwana abancinci ukuba bayidlale kwi-Zoom ndi-Spy. Abadlali kuya kufuneka bajonge imvelaphi yabo ukuze bafumane izinto ezinamagama. Okukhona unabo abadlali, kokukhona kuya kufuneka ujonge izinto.
Lo mdlalo usebenza kakuhle xa uqinisekisa ukuba amanqaku akho ekhamera ngasemva kubandakanya izinto ezininzi. Ukuba uyafuna, unokwenza imvelaphi exakekileyo ngokongeza imvelaphi ebonakalayo kwiskrini sakho okanye ukuphina imifanekiso kunye nezinto kwibhodi enkulu yezibhengezo ezibekwe emva kwakho.
Omnye umdlali uthi 'ndiyahlola' kwaye uchaza into ayibonayo komnye umdlali.
Abadlali banokutshintshana bebiza uqikelelo.
Umdlali oqikelela impendulo kuqala uza kuhlola into elandelayo.
Imibuzo engamashumi amabini
Nabani na ongadlala umdlalo weklasikhi weMibuzo engamashumi amabini kwi-Zoom. Ufuna ubuncinci abadlali ababini, kodwa ungadlala njengeqela.
Ukhetho-Ukwabelana kwescreen / ibhodi emhlophe
Omnye umdlali ucinga ngomntu, indawo, okanye into.
Bonke abanye abadlali banokubuza ukuya kuthi ga kwimibuzo engama-20 ewe okanye hayi ukuqikelela lo mntu, indawo, okanye into.
Abadlali kufuneka batshintshane ngokuchwetheza imibuzo kwincoko yeqela. Xa ubuza umbuzo, nika iinombolo ukubonisa ukuba ungumbuzo mni. Ungayisebenzisa ibhodi emhlophe yoku endaweni yengxoxo ukuba uyafuna.
Umntu obecinga ngezinto zodidi 'ewe' okanye 'hayi' emva kombuzo ngamnye.
Ukuba umdlali uqikelele, banokuchwetheza oko kwindawo yabo endaweni yombuzo.
Nabani na oqikelela impendulo echanekileyo uza nento elandelayo.
Ukuba abantwana bakho bayathanda ukunxiba okanye ukudlala umdlalo weROBLOX weFashoni yoBuchule, bayayithanda le nguqulo iphilayo. Uya kufuna ukudlala ekhaya ukuze ube nokufikelela kwimpahla kunye nezixhobo. Elikhulu iqela, okona kumnandi umdlalo.
iikowuti malunga nokulahlekelwa ngumhlobo osenyongweni ekufeni
Khetha umntu omnye oza kubamba umjikelo. Umbuki zindwendwe unika wonke umntu udidi, 'njengomlingo,' okanye indawo onokuya kuyo 'njengokhempu ehlathini.'
Bonke abanye abadlali kufuneka bafumane izinto ezijikeleze indlu yabo zokunxiba ezihamba nomyalelo womninimzi.
Xa umdlali enxibe kwaye ebuyela kwikhamera yakhe, nitshintshana ngokumodareyitha iimpahla zakho. Umntu ngamnye unokwabelana ngescreen sakhe ngokukhetha imbonakalo yekhamera, ke baya kuba ngowona mfanekiso mkhulu kwiscreen.
Emva kokuba wonke umntu ebonakalisile, umdlali ngamnye unemizuzwana engama-30 yokuvota engxoxweni yomntu abacinga ukuba wayenxibe eyona nto ifanelekileyo. Awunakho ukuzikhethela.
Umbuki zindwendwe uvota iivoti kwaye abhengeze ophumeleleyo.
Ophumeleleyo kumjikelo ngamnye uya kuba ngumgcini womjikelo olandelayo.
Cela umngeni kumalungu osapho lwakho kumdlalo okhawulezayo weMemori kwi-Zoom. Lo mdlalo weqela usebenza kakuhle kumaqela abuphi na ubungakanani.
Umdlali ngamnye kufuneka enze itreyi yezinto ezingafunekiyo ngaphambi kokuba ungene kwi-Zoom. Ungasebenzisa ipleyiti, itreyi yabo nabuphi na ubungakanani, okanye kwibhokisi ethe tyaba ukubamba ingqokelela yakho yezinto. Ukuba udlala nabantwana abancinci, gcina ingqokelela kwizinto ezisi-7 okanye ezimbalwa. Ukuba udlala nabantwana abadala, unokuba nezinto ezili-15 kwiitreyi zakho.
Khetha umdlali omnye ukubonisa ingqokelela yabo kuqala.
Lo mdlali kufuneka aqinisekise ukuba ividiyo yabo inkulu ngokukhetha ukhetho lokwabelana kwesikrini olubonisa umbono wekhamera.
Umdlali uya kubamba itreyi yakhe umzuzu omnye ukuze wonke umntu abone ukuba yintoni kuyo.
Xa kuphakame umzuzu omnye, umdlali uya kuyifihla itreyi yakhe. Bonke abanye abadlali baya kubathumela imiyalezo ngasese ngezinto abazikhumbulayo kwitreyi.
Umdlali okhumbula uninzi lwezinto nguye ophumeleleyo.
Ngomceli mngeni owongeziweyo, umdlali ngamnye makabonise itreyi yakhe umzuzu omnye, emva koko uzame ukukhumbula ukuba bekukho ntoni kwitreyi nganye eyahlukileyo.
Amagama osapho aScrabble
Ungadlala iscrabble ngaphandle kwamanqaku okusondeza usebenzisa iileta zamagama akho njengeethayile zakho. Lo mdlalo ulungele abantwana abadala kunye namaqela amane okanye amahlanu.
Vula uphawu lwebhodi emhlophe ngokunqakraza ku 'Yabelana' emva koko ukhethe 'iBhodi emhlophe.'
Umdlali ngamnye kufuneka akhethe umbala owahlukileyo wepen okanye isicatshulwa esivela kwicandelo 'lefomathi' kwibar yesixhobo sokuchaza.
Umdlali ngamnye kufuneka abhale igama lakhe lokuqala kwelinye icala lebhodi emhlophe. Ezi ziithayile zeleta umntu ngamnye aqala ngazo. Ufuna ukuba nonobumba abasi-7 ubuncinci, ukuze ukongeze oonobumba abasuka embindini nakwifani xa kufuneka njalo.
Oyena mdlali mncinci uhamba kuqala aze abhale igama embindini webhodi emhlophe esebenzisa oonobumba abavela kumagama abo kuphela. Banqumleza unobumba ngamnye njengoko eyisebenzisa.
Abadlali bayatshintshana bezama ukwenza amagama adibanayo.
Kwithuba lakho lesibini, ungathatha inani loonobumba owalisebenzisileyo kwigama lakhe nawuphi na umntu ecaleni kwakho kulungiselelo lwezikrini zevidiyo. Unokuba noonobumba abasi-7 kuphela ngexesha.
Ukudlala kuyaqhubeka de kungabikho mntu onokwenza igama elitsha.
Lo mdlalo ngokusisiseko ngumdlalo weScattergories kunye neScrabble. Abantu bayo yonke iminyaka bangadlala, kodwa lo mdlalo ulungele amaqela amancinci.
Umdlali omnye ukhetha uluhlu olubanzi lomdlalo, 'njengezilwanyana.'
Omnye umdlali uqala umdlalo ngokusebenzisa uphawu lwebhodi emhlophe ukubhala naliphi na igama abanokucinga ngalo elinxulumene nodidi.
Abadlali bayatshintshana ukongeza amagama odidi adibanisa kuwo nawaphi na amagama asele ebhaliwe kwibhodi emhlophe.
Jonga ukuba mangaphi amagama onokongeza kwi-Zoom yegama lakho.
Ukugcina unxibelelana nosapho kunye nabahlobo ngokusebenzisa iifowuni zevidiyo ezinjengezo zinikezelwa yi-Zoom kumnandi kwaye zilungile emphefumlweni. Inguqulelo yasimahla yeZoom kulula kuye nabani na ukuba afike nakwesiphi na isixhobo esinamandla e-intanethi kwaye inezinto ezininzi ezisisiseko. Cinga ngayo yonke imidlalo onokuyidlala kwi-Zoom!
Amandla Ukusebenza Ikati Ukufuya Iqela Uqeshiso Malunga Uxinzelelo Umyili Ingxoxo Irings
indlela yokucoca ityali yoboya ngokwakho
yeyiphi kwezi zilandelayo ngumzekelo wentetho yocingo
Ihowuliseyili yezihlangu ezithengiswa ngetyala
uthini emntwini olahlekelwe ngumntu
yimalini iibhili ezi-2 zeedola ezixabisa i-2020
Iminyaka esemthethweni yokufumana tattoo eCalifornia
yintoni intsingiselo yokunuka ukufa